Mobile and Digital Literacy Training သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
Wednesday, February 5, 2020 - 16:00
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၅
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် The Asia Foundation တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် Mobile and Digital Literacy Training သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၁၃) ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရှိ စုဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့ Hanns Seidel Foundation မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Achim Munz အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Wednesday, February 5, 2020 - 00:00
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် Hanns Seidel Foundation မှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Achim Munz အား ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီ H.E. Mr. Ly Quoc Tuan အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Tuesday, February 4, 2020 - 22:01
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၃
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်သံအမတ်ကြီ H.E. Mr. Ly Quoc Tuan အား ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Tuesday, February 4, 2020 - 00:00
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၄
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်တားဆီးကာကွယ် ရေးအတွက် အမျိုးသား လှုပ်ရှားမှုအသွင်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၂၁) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီး ကာကွယ်ရေးအတွက် အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှု အသွင်ဖြင့်ဆောင် ရွက်နိုင်ရန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
Monday, February 3, 2020 - 00:00
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန မူးယစ်ဆေးဝါး အန္တရာယ်တားဆီး ကာကွယ်ရေးအတွက် အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှု အသွင်ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နံနက်(၈)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဆိုင်ရာ သက်မွေးပညာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၃) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
Friday, January 31, 2020 - 22:32
ရန်ကုန်၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၃၁
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် အသိပညာမျှဝေဆွေးနွေးပွဲ (၁/၂၀၂၀) Sharing Insights Gained From Overseas Training Programmes (1/2020) အခမ်းအနားကျင်းပ
Friday, January 31, 2020 - 14:40
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၃၁
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် အသိပညာမျှဝေဆွေးနွေးပွဲ (၁/၂၀၂၀) အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၁ဝနာရီတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ် (၁၃) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
၂၀၂၀ နိုင်ငံတကာ Holocaust နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပ
Thursday, January 30, 2020 - 18:09
ရန်ကုန်၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၃၀
၂၀၂၀ နိုင်ငံတကာ Holocaust နေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝိဇ္ဇာခန်းမတွင် ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။
Wednesday, January 29, 2020 - 00:00
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၉
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (အခြေခံပညာကဏ္ဍ) ဒုတိယနေ့ အစီအစဉ်အား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာ-၂ (MICC-2)၌ ဆက်လက် ကျင်းပသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (အခြေခံပညာ ကဏ္ဍ) ဒုတိယပိုင်းအခမ်းအနား ကျင်းပ
နေပြည်တော် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၈
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (အခြေခံပညာ ကဏ္ဍ) ဒုတိယပိုင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း ဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2) ခန်းမ၌ အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ကျင်းပသည်။